UNSOM oo booqatay xabsiga dhexe ee Xamar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Saraakiil ka socota hay’adda Qaramada Midoobay ayaa socdaal kormeer ah ku tagay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, halkaas uu ku socdo howlo dayactir ah.
Francis Beno, oo ka mid ah saraakiishii booqtay xabsiga dhexe ayaa sheegay in xabsiga uu u baahan yahay qiimeyn dhab ah oo lagu sameeyo dhismaha xabsiga iyo daryeelka shaqaalaha ka shaqeeya xabsiga.
Beno, ayaa xusay in xafiiska ay ka tirsan yihiin ee UNSOM ay dareensan yihiin mudnaanta ay dowladda Soomaaliya siineyso sidii loo dayactiri lahaa dhammaan xabsiyada dalka uu leeyahay, balse haatan ay muhiim u tahay in dib u habeyn wanaagsan lagu sameeyo xabsiga dhexe, oo iminka ay dayactir ka waddo hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan la dagaalanka maandooriyaha iyo dembiyada.
Sarkaal ka tirsan Qaramada Midoobay, ayaa sheegay in ay haatan abaabulayaan tababaro dhinaca maamulka xabsiga ah oo al siinayo howl-wadeenada xabsiga.
Madaxa xabsiga Col. Xuseen Xasan Cismaan, ayaa soo dhoweeyey tallaabada ay UNSOM ku taageereyso xabsiga, wuxuuna sheegay in mararka qaar ay howl-wadeenada xabsi fulin Karin waajibaadyadooda sababo la xariira agabka loo baahan yahay oo xabsiga uusan laheyn, sida gaadiid iyo xabsiga uu qaybo badan ka burbursan.
Col. Xuseen, ayaa sheegay in hay’adaha kale ee amniga booliska iyo meleteriga ay helaan taageero la taaban karo balse ciidanka asluubta ee ilaaliyo xabsiyada ay yihiin kuwo la iska hilmaamay oo aan taageero helin.
Stephen Cox, oo ka mid ah saraakiishii booqatay xabsiga, ayaa sheegay in ay deeq bixiyaasha ka dalbadeen in xabsiyada la taageero dayactirka iyo gaadiid ay helaan.
Islaamiyiin qabsaday magaalada labaad ee Ciraaq